Iimpawu zeZodiac kunye neempawu zeOstrological Iintsingiselo kunye neempawu - Khetha Uphawu
Iimpawu zeZodiac kunye neempawu zeenkwenkwezi iintsingiselo kunye neempawu
Ngokucofa uphawu lwakho lwezodiac unokuyibona iprofayile yakho yezodiac epheleleyo, into ongowayo kunye neeplanethi ezilawula uphawu lwakho lwezodiac!
x Aquarius NgoJanuwari 20-Februwari 18 IiPisces NgoFebruwari 19-Matshi 20 I-ram Matshi 21-Aprili 19 Inkunzi yenkomo NgoAprili 20-Meyi 20 Gemini NgoMeyi 21-Juni 20 Umhlaza NgoJuni 21-Julayi 22 Ingonyama NgoJulayi 23-Agasti 22 Enyulu Agasti 23-Septemba 22 Ibhalansi NgoSeptemba 23-Okthobha 22 Unomadudwane Ngo-Oktobha 23-Novemba 21 Sagittarius NgoNovemba 22-Disemba 21 Capricorn NgoDisemba 22-Januwari 19 IHoroscope ITarot Funda ukuvumisa ngeenkwenkwezi Uthando Ukuhambelana Ikhalenda yeZodiac Izinto Izindlu ezili-12 IiPlanethi Iimpawu Itshathi Yokuzalwa
Owona mthombo wakho wolwazi malunga neempawu zokuvumisa ngeenkwenkwezi
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni uphawu lwakho lwezodiac kwaye zeziphi iimpawu ohambelana nazo, ufike kwindawo elungileyo. Apha uya kufumana yonke into enxulumene nokuvumisa ngeenkwenkwezi ze-zodiac, ukuhambelana komqondiso we-zodiac kunye neentsuku zeempawu ze-zodiac.
Kukho imiqondiso ye-zodiac ye-12, kwaye uphawu ngalunye lunamandla kunye nobuthathaka, iimpawu ezithile, iminqweno, kunye nesimo sengqondo malunga nobomi kunye nabanye abantu. Ngokusekelwe kuhlalutyo lwemifanekiso yesibhakabhaka, okanye kwindawo yeeplanethi ngexesha lokuzalwa, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokukunika ingqiqo kwiimpawu ezisisiseko zomntu, izinto azikhethayo, iimpazamo kunye noloyiko lwakhe. Singakwazi ngokwenene ukubazi ngakumbi abantu ukuba siyazazi iimpawu ezisisiseko zemiqondiso yeenkwenkwezi.
Ngamnye kwimiqondiso ye-12 ye-horoscope iwela phantsi kwento ethile. Izinto ezine zezodiac zezi: umoya, umlilo, umhlaba kunye namanzi kwaye nganye kuzo imele uhlobo lokuqala lwamandla asebenza kuye ngamnye wethu. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kujolise ekusincedeni ukuba sigxininise amandla aso kwizinto ezilungileyo kwaye sibe nokuqonda ngcono iimpawu zethu ezintle kunye nokulawula iimpawu ezimbi.
Izinto ezine zifumaneka kuthi sonke kwaye zichaza iintlobo ezine zobuntu ezizodwa ezinxulumene nemiqondiso yokuvumisa ngeenkwenkwezi. Izinto ezine zezodiac zibonisa impembelelo yazo enzulu kwiimpawu zomlinganiswa ezisisiseko, iimvakalelo, ukuziphatha kunye nokucinga.
Iimpawu zamanzi ngabantu abathanda kakhulu kwaye banovelwano kakhulu. Zinomdla kakhulu kwaye zinokuba yimfihlakalo njengolwandle ngokwalo. Iimpawu zamanzi zinenkumbulo enkulu kwaye ziyathanda iincoko ezinzulu kunye nobudlelwane obusondeleyo. Bazigxeka ngokuphandle yaye basoloko bekulungele ukunceda abo babathandayo. - Umhlaza , Unomadudwane kwaye IiPisces .
Iimpawu zomlilo zikholisa ukuba nomdla, ziguquke kwaye zibe nomsindo. Bacaphuka ngokukhawuleza, kodwa baxolela ngokulula. Bangabahambi abanamandla amakhulu. Bomelele kakhulu ngokwasemzimbeni kwaye bayakhuthaza kwabanye. Iimpawu zomlilo zihlakaniphile, ziyazazi, ziyila, abantu abanqwenelekayo abasoloko belungele isenzo. - I-ram , Ingonyama kwaye Sagittarius .
Iimpawu zomhlaba ngabantu abasekelwe kwiplanethi kunye nabo basibuyisela emhlabeni. Ubukhulu becala balondoloza kwaye banokwenyani, kodwa banokuba neemvakalelo kakhulu. Bathanda ubunewunewu nezinto eziphathekayo. Zikhonkrithi, zithembekile kwaye zizinzile kwaye zihlala nabantu ngamaxesha anzima. - Inkunzi yenkomo , Enyulu kwaye Capricorn .
Iimpawu zomoya ngabantu abathanda unxibelelwano kunye nobudlelwane nabanye abantu. Bangabantu abacingayo, banobuhlobo, banobukrelekrele, bayancokola kwaye bahlalutya. Bathanda iingxoxo zefilosofi, imisebenzi yentlalo kunye neencwadi ezilungileyo. Bayakuthanda ukunika iingcebiso kodwa basenokungakhathali. - Gemini , Ibhalansi kwaye Aquarius .
Itheyibhile yokuhambelanauthando iimpawu zezodiac
Akukho zibonakaliso ze-zodiac ezingahambelaniyo kwi-astrology, nto leyo ethetha ukuba nayiphi na imiqondiso emibini iyahambelana ngakumbi okanye ngaphantsi. Abantu ababini abaneempawu zezodiac ezihambelana kakhulu baya kuhambelana kakuhle kuba bakubude obufanayo. Kodwa, abantu abaneempawu ze-zodiac ezingahambelani kakhulu, kuya kufuneka babe nomonde ngakumbi kunye nediplomatic ngakumbi ukuze bafezekise ubudlelwane obonwabileyo kunye nobunye.
Njengoko sonke sisazi, iimpawu zezodiac zizinto ezine:
Umlilo : Aries, Leo, Sagittarius
Umhlaba : Taurus, Virgo, Capricorn
Umoya : Gemini, Libra, Aquarius
Amanzi : Umhlaza, iScorpio, iiPisces
Iimpawu ezinento efanayo ziyahambelana ngokwendalo kuba ziqondana kakuhle kangangoko. I-Synastry lisebe lokuvumisa ngeenkwenkwezi apho ii-horoscopes ezimbini zifaniswa ukumisela umgangatho wobudlelwane bothando phakathi kweempawu ze-zodiac. I-Synastry okanye i-horoscope yobudlelwane ingaba sisixhobo esiluncedo kumaqabane anqwenela ukwazi amandla kunye nobuthathaka kubudlelwane babo. Ukuthelekisa imiqondiso nako kunokunceda ukuqonda ngcono iqabane, nto leyo eya kukhokelela kubudlelwane obungcono.
Itheyibhile elandelayo ibonisa ukuhambelana kothando lweempawu zezodiac. Jonga kwitshathi kwaye ubone ukuba yeyiphi imiqondiso yezodiac ehamba kakuhle kunye!
Ukufunda itshathi yokuhambelana nomqondiso wezodiac, fumana ngokulula uphawu lwakho lwezodiac kwikholamu esekhohlo kwaye ujonge ubungakanani bentliziyo ebekwe kwikholamu ehambelana nophawu lwezodiac yeqabane lakho. Intliziyo inkulu, kokukhona ukuhambelana kwakho.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kusekelwe kwinzululwazi ngeenkwenkwezi eqhelekileyo. Ukuphuhliswa kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kunxulunyaniswa nenzululwazi ngeenkwenkwezi eyakhula kwinzala kaHan. I-Zodiac yaseTshayina yeyona nkqubo indala eyaziwayo emhlabeni kwaye yenziwe zizilwanyana ezilishumi elinesibini ezimele unyaka othile. Ngokutsho kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina, unyaka wokuzalwa komntu umelwa sesinye sezi zilwanyana. Iimpawu ezilishumi elinesibini zezilwanyana okanye imiqondiso yezodiac yiBuku, iNkomo, iNgwe, uMvundla, iNyoka, iNyoka, iHashe, iigusha, iNkawu, iQhude, iNja kunye neHagu. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina kukwaquka izinto ezintlanu zendalo ezizezi: amanzi, iinkuni, umlilo, umhlaba nesinyithi. Ngokutsho kokuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaTshayina, ikamva lomntu linokumiselwa kwindawo ezimi kuyo iiplanethi neendawo ezimi kuzo iLanga neNyanga ngexesha lokuzalwa kwakhe. AmaTshayina akholelwa ukuba unyaka wakho wokuzalwa unokugqiba isimo sengqondo kunye namandla ethu kwaye iimpawu zezilwanyana zokuzalwa zinomqondiso kwaye zibonisa ukuziphatha okuthe ngqo.
IJyotisha yinkqubo yemveli yamaHindu yokuvumisa ngeenkwenkwezi kunye nenzululwazi ngeenkwenkwezi, ekwabizwa ngokuba yiHindu okanye ngeenkwenkwezi zamaIndiya okanye ngokuvumisa ngeenkwenkwezi kweVedic kutshanje. I-astrology yeVedic ye-horoscopes yohlulwe yangamacandelo amathathu aphambili: i-astronomy yaseIndiya, i-astrology ye-mundane kunye ne-astrology eqikelelwayo. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaIndiya kunokutyhila umlingiswa wethu, ukuqikelela ikamva lethu kwaye kuveze ukuba yeyiphi imiqondiso eyona ihambelanayo. Esinye sezona zixhobo zibalaseleyo esizinikwe yiVedic ukuvumisa ngeenkwenkwezi kukuhambelana kweenkwenkwezi. I-Nirayana (i-sidereal zodiac) libhanti lentelekelelo le-360 degrees elifana ne-tropical zodiac yahlulwe yangamacandelo alishumi elinambini alinganayo. Ngokungafaniyo nokuvumisa ngeenkwenkwezi kwaseNtshona okusebenzisa i-zodiac ehambayo, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kweVedic kusebenzisa i-zodiac esisigxina. Kwakhona, kwinkqubo yeVedic zodiac, awuselulo uphawu lweenkwenkwezi obucinga ukuba unguye.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwamaMayan kusekwe kwikhalenda yamaMaya kwaye yenye yezona zinto zibonwayo ngokuvumisa ngeenkwenkwezi. Ikhalenda yeMaya okanye iTzolkin isekelwe kumandla angabonakaliyo kwi-cosmos kunye nokuvela kwendalo. Ikhalenda yeTzolkin yenziwe ngeempawu zeentsuku ezingamashumi amabini (izizwe zelanga) kunye neenombolo ezilishumi elinesithathu zeGalactic, ezenza ikhalenda yonyaka yeentsuku ezingama-260. AmaMaya amandulo ayekholelwa ukuba ukuze kubekho uxolo nemvisiswano ebomini, umntu kufuneka aqonde kwaye ahambelane namandla endalo yonke. Uphawu ngalunye kwezingamashumi amabini lumele usuku kwikhalenda yeMeya, ngaloo ndlela ivumela abantu abasuka kwiinyanga neminyaka eyahlukeneyo ukuba babelane ngeglyph yosuku olunye. Uphawu lomhla wamaMaya luchaza ubuntu bakhe.
Kutheni sikholelwa kuyoukuvumisa ngeenkwenkwezi
Impendulo yalo mbuzo ikwinkalo efanayo naleyo yokuba kutheni sikholelwa kwiinkolelo zobomi. Abantu bakholelwa kwi-Astrology kuba isinika izinto ezininzi esizifunayo ezifana nolwazi kunye nesithembiso sekamva, indlela yokusombulula iingxaki zabo kunye nokuphucula ubudlelwane babo neqabane, usapho kunye nabahlobo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthi akukho nto ebomini eyenzeka ngamabona-ndenzile yaye yonke into eyenzekayo kuthi iyenzeka ngenxa yesizathu esithile. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusinika iimpendulo ezilungileyo ngesizathu sokuba ezi zinto zisehlele yaye kunokukuxela kwangaphambili kusengaphambili. Ngale ndlela, ukuvumisa ngeenkwenkwezi ngokwenene kunceda abantu baliqonde ngakumbi ihlabathi elibangqongileyo.
Njengoko kusenziwa namhlanje, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusebenza kakuhle. Abantu abaninzi abaya kubavumisi ngeenkwenkwezi bahlala bonwabile yaye banelisekile. Oku akuthethi ukuba abavumisi ngeenkwenkwezi baqikelela ngokuchanekileyo ikamva lomntu ngokusekelwe kwimihla yabo yehoroscope, kodwa oko kuthetha ukuba ukuba noqikelelo lweenkwenkwezi kunokuba ngamava anomvuzo ngokwenene.
Umhlaba wam ubekwe phantsi kwamakroza awaziyo wonke umntu njengophawu lwenkwenkwezi. Abantu abaninzi bayilandela ngenkuthalo ihoroscope yabo yaye bayakholelwa kwintsingiselo yomqondiso wabo wokuvumisa ngeenkwenkwezi. Oku akumangalisi, kuba ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthandwa kakhulu kwaye wonke umntu emhlabeni uyazi iimpawu zabo kunye nemihla. Abantu bayakonwabela ukufunda uqikelelo lweenkwenkwezi kwaye oku kuhlala kukhokelela kutshintsho kubuntu, indlela yokuziphatha kunye neenkqubo zokwenza izigqibo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokuba luncedo kuba kukuvumela ukuba wazi imiqobo kunye neengxaki ezizayo kwangaphambili. Kukuwe ukuba uyafuna na ukusebenzisa ingcebiso kwaye uthathe amanyathelo okhuseleko acetyiswayo ekufundeni i-horoscope kwaye ke uzisindise ekubandezelekeni ngaphandle kokwenza okuninzi.
Abantu bakholelwa ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kuba kuyonwabisa nje. Imihla yeZodiac, imiqondiso, amaqhinga okuvumisa nokunye. Iimpawu zeZodiac zinokunxulunyaniswa nayo yonke inkalo yobomi bethu kwaye siya kubona ukuba zityhila ngokwenene kwaye zichanekile. I-horoscope yethu yahlukile kwaye inokusinceda sifumane kwaye siveze amandla ethu, ubuthathaka kunye neempawu zendalo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokusinceda sifumanise ukuba loluphi unxulumano oluhambelanayo- kwaye loluphi olungahambelaniyo. Ukuhambelana kwe-Horoscope kunokuphucula ubudlelwane bethu kunye nezinye iimpawu ze-zodiac. Ngokwazi amandla ethu othando, unokuwasebenzisa kakuhle amathuba uze uthabathe amanyathelo afanelekileyo okuphila uthando olonwabileyo okanye ubomi bomtshato obanelisayo.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthathela ingqalelo iinkalo ezimbini eziphambili - amandla ethu okuzalwa kunye nefuthe leeplanethi kunye neenkwenkwezi kwi-horoscope yethu yobuqu. Inokusinceda sikhethe umsebenzi ofanelekileyo kunye neprojekthi efanelekileyo yemfundo ukuze siphile ubomi obonwabisayo nobunempumelelo.
Okokugqibela, kodwa kuncinci - sikholelwa kwiinkwenkwezi kuba imalunga nathi. Ihoroscope yam ifana neplani yobomi bam eyenziwe ngokuchanekileyo ngexesha lokuzalwa kwam. Oko kuthetha ukuba imephu yakho ye-astral yohlukile njengeminwe yakho. Indawo esikuyo isijikelezi-langa ngasinye kwihoroscope yam sinokutyhila okuninzi ngobuntu bam kunye nekamva lam.
Ezinye iinyani zokwenyani malungaukuvumisa ngeenkwenkwezi
Ngokutsho kohlolisiso olwenziwa ngowe-1999, amagama athi ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunye nokuvumisa ngeenkwenkwezi zezona zinto ziphandwa kakhulu kwi-Intanethi.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthathwa njengobugcisa kunye nesayensi. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi bubugcisa kuba ukutolika kuyafuneka ukudibanisa imiba eyahlukeneyo kunye nokwenza umbono weempawu zomntu. Nakuba kunjalo, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kukwagqalwa njengenzululwazi kuba kufuna ukuqonda ngeenkwenkwezi nezibalo.
USixtus IV ngupopu wokuqala ongumKatolika ukuzoba nokutolika ihoroscope, uLeo X noPaul III babesoloko bethembele kwicebiso lezazi ngeenkwenkwezi ngoxa uJulius II wayekhetha umhla wokubekwa kwakhe etroneni ngokuvumisa ngeenkwenkwezi.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kwakubaluleke kakhulu kuAdolf Hitler, uzwilakhe weJamani yamaNazi. Kukholelwa ukuba le nkokeli yaseJamani yadibana nezazi ngeenkwenkwezi kuyo yonke iMfazwe Yehlabathi II.
I-Astrocartography yindlela yokuvumisa ngeenkwenkwezi yasekuhlaleni ethi ibona iimeko zokuhlala ezohlukeneyo ngokwejografi. Kuye kwaboniswa ukuba ngokuthelekisa iTshati yakho yokuZalwa kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni jikelele, unokugqiba indawo apho uya kuphumelela kakhulu.
Khetha Uphawu I-Capricorn Isagittarius Iiary I-Scorpio